1859 Otu ụkọchukwu Anglịkan kpọrọ oku oku n'ihu ọha maka ijikọ ụka Protestant na Canada.
1874, 1881, 1886 Oku maka ịdị n’otu kwughachiri ma wusie ike.
1888 Nzukọ nke Lambeth (nke ndị bishọp Anglịkan) kwadoro isi ihe mmụta okpukpe anọ a nabatara maka ntọala nke njikọta.
1889 E hiwere ogbako banyere njikọ ụka na Toronto. Ndị Anglican, Methodist na Presbyterian bịara. Ndị Ọgbakọ na Baptist kwadoro atụmatụ a.
1906 Ndị Anglịkan hapụrụ ụka mkparịta ụka ụka.
1908 Okpukpe ndị fọrọ afọ kwetara na akwụkwọ “Basis of Union”.
1910 Ndị Ọgbakọ nabatara njikọ ahụ.
Ndị Metọdist 1912 kwadoro njikọ ahụ.
Ndị 1916 Presbyterian kwadoro njikọ ahụ, mana mkpebi ahụ kewara ụka.
Ndị omeiwu 1924 kwadoro United Church of Canada Act, na-ekpochapụ ihe mgbochi iwu.
1925 (June 10) E hiwere United Church of Canada. Ndị otu ụka nke Union Union sonyere na mmakọ ahụ ebe ndị Presbyterian ka nọ na-ekewa.
1930s The UCoC nyere isi ịda mbà nri nri; mma iji ọgwụ mgbochi; chia nwanyị ụkọchukwu; megidere usoro iwu gọọmentị siri ike; kwadoro nkwupụta nke Udo na Mwepu mba ụwa; ma na-emegide mgbochi Semitism.
1939 Ndị otu udo na mmadụ iri isii na asatọ katọrọ ụka n'ihu ọha maka nkwado ya n'ịlụ agha.
1942 General Council nke ụka jụrụ ịkwado atụmatụ a.
Agha IIwa nke Abụọ CCoC kwadoro enyemaka gọọmentị na nnọchite ndị na-egwupụta akụ.
1945-1965 CCoC gosipụtara oge "Golden" ya nke uto, ọganihu, na mmetụta.
1962 E webatara Usoro Ọmụmụ Akwụkwọ Sundaylọ Akwụkwọ Ọhụrụ na nke na-ese okwu.
1968 UCoC kwadoro Nkwekọrịta Ọhụrụ nke mere ka nkwupụta okwu nke nkwenkwe Ndị Kraịst mee ka ọ dị ọhụrụ.
1970s Afọ iri bụ otu nkwado siri ike maka itinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ozuzu, ma ụlọ ma mba ụwa.
1984 UCoC wepụrụ mmegide gọọmentị ya na ite ime.
1988 UCoC kwụsịrị imegide ndị ụkọchukwu na-edina ụdị onwe.
Mbubreyo 1980s UCoC kwupụtara n'ihu ọha na ya nwere nkwekọrịta na ikpe na-ezighị ezi ọha na eze dị iche iche wee malite usoro mgbaghara maka ndị merụrụ ahụ.
1992 UCoC kwadoro akụkọ banyere Authority na nkọwa nke Akwụkwọ Nsọ nke mere ka ngagharị iwe dị ukwuu n'ime ụka.
2012 General Council kwadoro nchịkọta nhọrọ nke ngwaahịa Israel.
United Church of Canada (UCoC) abụghị ihe ọhụrụ. Ọ bụ ụka hibere n’elu ọhụụ na ebumnobi, ha abụọ kesara n’oge ahụ, kama karịa na mmụta mmụta sayensị nke otu onye guzobere ma ọ bụ mmegharị.
Njikọ nke ndị Methodists, Congregationalists, Union Churches, na ọtụtụ ndị Presbyterian gosipụtara ebumpụta ụwa nke oge, nchegbu logistist na mpaghara ozi, na ọchịchọ maka otu, ozioma, mba, olu Protestant zuru oke iji metụta gọọmentị na ọdịbendị nke mba ọhụrụ. Ewere nke a dị ka ngwa ngwa, ọkachasị na mbata na ọpụpụ. E gosipụtara olileanya ndị a kpọmkwem na akwụkwọ ntọala (Schweitzer et al. 2012: 15-16, 20-21).
Ecumenism bụ ihe a ma ama na ọtụtụ narị afọ nke 19, ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị n'ime ọdịnala mmụta okpukpe. N'ezie, ụka nke ọ bụla jikọtara ọnụ, ewezuga Union Union, bụ n'onwe ya sitere na ọtụtụ njikọta n'ọdịnala ụka ya. (Schweitzer et al. 2012: 20-21)
Canada nwere nnwere onwe na 1867 ma edozighi ya. Ọtụtụ ókèala, karịsịa na North na West, nọgidere bụrụ mpaghara ọrụ mgbasa ozi. Ntughari mgbalị na ihe ndi ozo mere ka ndi mmadu choo ma obu mmekorita. Onye mbụ kwupụtara mmasị n'ihu ọha na njikọ ụka na mpaghara ụka dị iche iche sitere n'aka ndị Anglịkan (Churchka Englandngland) dịka 1859. A kpọghachiri oku a n'ụzọ siri ike na 1874 na 1881, ọzọkwa na 1886, mgbe ndị Anglịkan kpọrọ oku maka mkparịta ụka nkịtị na họpụtara kọmitii ga-ezute ụka ndị ọzọ. Na 1888, Nzukọ Lambeth (nke ndị bishọp nke ụka Anglịkan) wepụtara Lambeth Quadrilateral, akwụkwọ na-enye isi ihe mmụta mmụta anọ nke enwere ike iji bụrụ ntọala nke njikọta na mpaghara ụka.
Nke a dugara na nzukọ banyere njikọ na Toronto n'afọ na-eso ya nke gụnyere Anglịkan, ndị Methodist, na ndị Presbyterian. Ndị Ọgbakọ nyere nkwado; Baptist gosiri mmasị. Mana ka ọ na-erule afọ 1906, ndị Anglican enweela ụkwụ oyi ma pụọ ​​(Baptist kwadoro ya). Nke a gbochiri mmegharị nke azọrọ na nsonye ọ chọrọ. Ma mkparịta ụka gara n'ihu, na 1908, "Basis of Union," nke na-akọwa nkà mmụta okpukpe na iwu nke ụka ọhụrụ, kwetara ma zigara ya ọmụmụ (Schweitzer et al. 2012: 16, 21; United Church of Canada 2013).
Mgbe afọ abụọ nke ọmụmụ na mkparịta ụka gachara, ndị Congregationalists ahụ kwadoro akwụkwọ a na 1910 na ndị Methodists kwadoro na 1912. Ndị Presbyterian kwadoro akwụkwọ ahụ na 1916. N'ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Presbyterian jụrụ ikwenye, otu esemokwu nke ịrọ òtù mekwara na njikọ ahụ 1925 (Schweitzer et al. 2012: 17).
E kesara akwụkwọ ahụ nke ọma ma nwee nsonaazụ na-atụghị anya ya, mepụta ọgbakọ nke anọ na-emekọrịta ihe. Ọtụtụ obere obodo na West gbalịsiri ike ịkwado ụka ụka atọ (ma ọ bụ karịa). Ọtụtụ mgbe, ọgbakọ na-ezukọta ọnụ na chọọchị ọ bụla nwere onye ụkọchukwu. Akwụkwọ edemede nke Union Union ghọrọ ihe mgbakwasị ụkwụ maka ọgbakọ ndị otu ọgbakọ a na-akpọ, na-esonyeghị ụka ọ bụla bu ụzọ. N'ikpeazụ, e guzobere usoro okpukpe, gụnyere, site n'oge njikọ, ihe dị ka otu narị ụka. Ha niile banyere United Church na nhazi (Schweitzer et al. 2012: 7, 18-19; United Church of Canada 1925).
Ndị Ome Iwu nke Canada nakweere United Church of Canada Act na 1924, na-ekpochapụ ihe mgbochi nile nke iwu na njikọ nke ụka. Na n'ụtụtụ Wenesde, June 10, 1925, e guzobere nzukọ na-akpali akpali n'obodo ndị mepere emepe Toronto United Church nke Canada. Mmadu asato mere emume n’ulo mgba mgba na ebe a na-eme ice hockey. Ọtụtụ puku ndị ọzọ bịara ọrụ ndị yiri ya na mba ahụ ma ọ bụ gee ntị na mgbasa ozi nke ememme ahụ. Njikọ ahụ mepụtara ụka okpukpu abụọ ka Chọọchị Anglịkan, nke ụka Protestant kachasị ukwuu. Naanị Chọọchị Roman Katọlik ka ukwuu (Schweitzer et al. 2012: 4-6, 9).
Ka ọ na-erule mbido 1930s, chọọchị ahụ agbakwunyela usoro iwu na ego ya wee bido ịmalite ụdị mmadụ pụrụ iche. Omume nke General Council n'oge a na-egosi agwa a. Na 1931, kọmitii na-ahụ maka ihe mberede mba jupụtara ọtụtụ narị ụgbọ okporo ígwè na nri maka oge nkụda mmụọ-oge agụụ. Chọọchị ahụ gbara aka na amụma gbasara ego nke gọọmentị siri ike nke RB Bennett, mgbochi mgbochi a kwadoro, họpụtara onye ozi nwanyị ma kwuo okwu megide mgbochi Semitism. Na 1932, Council kwadoro International Peace and Disarmament Report na na 1934 akụkọ banyere Christianizing the Social Order (Schweitzer et al. 2012: 25, 31, 40, 46).
Na 1942, General Council jụrụ ịkwado mmanye, mana ozugbo agha malitere, UCoC ji “mkpebi siri ike” bịakwute esemokwu ahụ. Ma, n’ọnwa Ọktoba afọ 1939, ndị na-eme ihe ike n’otu ọgbakọ dị iri isii na asatọ katọrọ chọọchị ahụ maka ịkwado agha ahụ. Ihe ngosipụta ha kwuru na ụka kwubiri na agha megidere uche Kraịst, na ọbịbịa nke agha agbanwebeghị nkwa ahụ. Ọgba aghara nke ọgba aghara malitere. Akwụkwọ akụkọ dị iche iche na Canada katọrọ ndị bịanyere aka na ya dị ka ndị sabo ma jụọ iguzosi ike n'ihe nke UCoC ahụ. Onye isi kansụl ahụ jụrụ ndị bịanyere aka na ya ma kwupụta iguzosi ike n'ihe ụka ahụ na Canada na eze. A manyere ọtụtụ ndị bịanyere aka na ya n'okpukpe ha. Ntinye aka nke ụka ahụ na agha ahụ nọgidere bụrụ arụmụka, ụka ahụ n'onwe ya kwadokwara ọtụtụ mmadụ maka ọnọdụ onye jụrụ ajụ (Schweitzer et al 68: 2012-59).
N'oge a, chọọchị kwadoro ntinye aka gọọmentị na nnọchite ndị na-egwupụta akụ na Kirkland Lake, Ontario, na-egosi na ha na-enyere agha ahụ aka. Agbanyeghị, ntinye aka a gosipụtara ihe ghọrọ nkwado United Church na-akwado maka ọrụ ọrụ. Chọọchị bidokwara ogologo oge nke itinye aka na nkwado nke otu pere mpe. UCoC kwetara, n'otu aka, ịkwaga ndị Japan-Canada site na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, mana, n'aka nke ọzọ, ha abụọ guzobere ụlọ akwụkwọ maka ụmụ nke ndị ahụ kwagara ma na-emegide mbupụ. Chọọchị ahụ sonyekwara na nzukọ ndị Juu nke Canada na-enyere aka mata banyere nsogbu ndị gbara ọsọ ndụ nke Europe. Na njedebe nke agha ahụ, otu kọmitii na-akọchitere General Council kpọrọ maka Canada mgbe agha gachara dị ka ọdịmma zuru oke (Schweitzer et al. 2012: 66-70).
Chọọchị ahụ kwubiri nchekwube agha ahụ na ọ nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịgbanwe mba nke ime mmụọ na mmekọrịta ọha na eze. N'ezie, oge site na njedebe nke agha ruo na njedebe nke 1960s akọwala dịka oge ọla edo maka United Church of Canada. Ikwusa ozi ọma, ndị lagoro ezumike nka, ụmụ ọhụrụ, na ịkwaga na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ niile nyeere ụka aka itolite na ọnụ ọgụgụ nke ndị tụrụ anya na ndị isi. E guzobere ọtụtụ narị chọọchị ndị ọhụrụ, ụlọ nzukọ chọọchị dị iche iche, na mans. Nkwado ndị otu na-emesapụ aka na oge nchekwube a. Headquarterslọ isi ụlọ ọrụ ọhụrụ na 1959 gosipụtara nchekwube a. Ndị otu rịrị elu na 1968 n'ihe dịka 3,500,000 (Schweitzer et al. 2012: 72-83, 93, 98).
N'afọ ndị 1970 hụrụ General Council na ọfịs etiti itinye aka na ntinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Isi nsogbu bụ
ime, ọrụ ụmụ nwanyị na chọọchị (ikekwe nke kacha esemokwu), mmekọrịta ndị France na Bekee, mmekọrịta na ndị mbụ mba, ịkpa oke agbụrụ na South Africa na ikike nke Palestine Liberation Organization na-anọchite anya ndị Palestine (Schweitzer et al. 2012: 109- 11, 129-35).
Akwụkwọ ọmụmụ ihe, "Na Onyinyo Chukwu… Nwoke na Nwanyi," nke General Council natara na 1980, yana akụkọ 1984 na-esochi, "Onyinye, Dgha na nkwa," ọnụ mepụtara mgbasa ozi na esemokwu, ọkachasị n'ịkọwa Akwụkwọ Nsọ na nwoke idina nwoke. Na 1988, kansụl ukwu nabatara nkwupụta nke wepụrụ nwoke idina nwoke dịka ihe na-egbochi nhazi. Chọọchị ahụ malitekwara na 1980s usoro na-aga n'ihu na-amata na ya nwere mmekọrịta na-ezighị ezi na-elekọta mmadụ, na-ebute usoro mgbaghara maka ndị chere na mmegbu ahụ mebiri ma ọ bụ mebiri (Schweitzer et al. 2012: 141-47, 151-53) .
Ka ọ dị ugbu a, ịhapụ ọnụọgụ ndị otu, ọgbakọ, na akụrụngwa, yana ntụkwasị obi na-arịwanye elu na iguzogide onye isi ndu, dugara mbọ na nhazigharị na ilekọta ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Ndị a malitere iwepụ ikpe ziri ezi na mmekọrịta mmadụ na nwanyị, n'agbanyeghị na ụka gara n'ihu na-arụsi ọrụ ike na atụmatụ dị iche iche (Schweitzer et al. 2012: 164-70, 174-77).
United Church of Canada bụ taa nzukọ pere mpe karịa ka ọ dị na 1950s na 1960s. Ọzọkwa, ndị mmadụ abụọ dara na ndị otu na gọọmentị nwere ọtụtụ ọdịnala na nke ọdịbendị nke mba Canada belatara mmetụta ya. Ma nkwupụta site n'aka General Council ya na-aga n'ihu na-akọ akụkọ zuru oke ma yie ka ọ nwere mmetụta na echiche ọha na eze, dịka mkpebi nke General General Council na-emegide otu pipeline mmanụ nke ugwu na iji gwapụta nnabata nhọrọ nke ụfọdụ ngwongwo Israel. Mkpebi ndị a bụ akụkọ n'ihu ihu na akwụkwọ akụkọ na-eduga na Canada (Lewis 2012).
Mata nkwenkwe nke United Church of Canada (UCoC) nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma na-akụda mmụọ mgbe ụfọdụ n'ihi ọtụtụ ihe. N’otu aka, UCoC bụ isi okwu, Atọ n’Ime Otu, Protestant, ụka ndị Kraist ji, ruo ụfọdụ, ọtụtụ nkwenkwe Ndị Kraịst ọdịnala. N'aka nke ọzọ, UCoC bụ otu n'ime naanị ụlọ ụka atọ e guzobere n'ofe ọdịnala nkwupụta. N’ime nnukwu ụlọikwuu ya, ụfọdụ echiche okpukpe na-emegiderịta onwe ha bụ ihe ọdịnala ọdịnala ndị mbụ ahụ. Ọzọkwa, ebumnuche ahụ bụ ebumnuche ndị ozi ala ọzọ na ebumnuche mmekọrịta ọha na eze, ime nke ọma nke ndị Kristian nke obodo ọhụrụ, ọ bụghị site na ịdị mkpa nke otu ọnọdụ mmụta okpukpe. N'ihi ya, a naghị ekpochapụ nkwenkwe ndị ahụ (United Church of Canada 2006; Schweitzer et al. 2012: xi, 14).
A na-ewerekarị UCoC dị ka ụka "na-abụghị nkwenye", ọtụtụ ndị na-ekiri ihe na-ele ya anya na-egosi na ọ nweghị nkà mmụta okpukpe. Mana, n'eziokwu, UCoC kwenyere n'ụkpụrụ atọ, abụọ oge ochie na otu nke aka ya, ebe nrụọrụ weebụ na-enyekwa nkwupụta nkwenkwe atọ zuru oke ma kwenye. Agbanyeghị, atumatu nke itinye ọnụ na nnwere onwe nkwenye n'ime ụka pụtara na ndị otu n'otu (na ụka ọbụla) nwere ike inwe echiche dị iche. Nsogbu ndị na-ekiri ihe na-emenụ abụghị na e nweghị usoro mmụta okpukpe, mana na, dị ka otu onye edemede kwetara, ụka bụ "awash na nkà mmụta okpukpe" (Schweitzer et al. 2012: 259-60; United Church of Canada 2006).
Okpukpe nke ọdịnala, ezigbo njirimara nke nkwenkwe UCoC bụ nnabata siri ike itinye na ihe a na-akpọkarị "mmekọrịta mmadụ na ibe ya." Dị ka e kwuru na ngalaba "Otu akụkọ ihe mere eme" nke dị n'elu, nsogbu mmekọrịta a malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo e guzobere ụka ma gaa n'ihu na mkpọsa na nkwupụta. Nsonye nke ndị ụkọchukwu na ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị na ịnakwere alụmdi na nwunye bụ otu n'ime ihe atụ ndị a ma ama n'oge a (Schweitzer et al. 2012: 291-94).
N'ihe banyere nchegbu banyere nkà mmụta okpukpe ọdịnala, chọọchị ahụ anabatala ụkpụrụ abụọ nke oge ochie ma mepụta nke ọhụrụ nke na-eme ka mesie ike karị n'ihe a hụrụ dị ka uche Chineke na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'agbanyeghị na ọ ka bụ ihe nkịtị. A na-ahụ ya n'anya nke ukwuu ma jiri ya mee ihe. Enwekwara nkwupụta okwukwe atọ a kpọtụrụ aha n'elu: ngalaba "nkuzi" nke "Basis of Union," 1940 "Nkwupụta Okwukwe," na 2006 "Abụ Okwukwe," niile a na-ewere na ha ka dị ike. Ndị a bụ ụdị mmụta okpukpe, mana ha niile na-egosipụta "ọdịnala okwukwe na-aga n'ihu ma na-eto eto" (Schweitzer et al. 2012: 259, 272; United Church of Canada 2006).
Ebumnuche nke mkpughe nke Akwụkwọ Nsọ (ma nke ochie ma nke agba-ochie) ka a nabatara n’ime akwụkwọ atọ a nile, ọ bụ ezie na uru nke mkpughe ndị ọzọ sitere na mkpughe amụbaala karịa okwu atọ ahụ. Ọzọkwa, a ghọtara mkpa ọ dị ịkọwa ihe, ma ndị ọkà mmụta ma ndị obodo. Ekwuputara ya na akwukwo nso ka ekwesiri iji ya ma buru ya (Schweitzer et al. 2012: 259-61, 272; United Church of Canada 2006).
Nkowa nke Chineke dika “ihe omimi” karia nghota nke mmadu zuru oke na uzo ndi mmadu no bu ihe ndi ozo, dika nkwenye na Jisos Kraist dika nkpughe nke Chineke. Akwụkwọ ndị ahụ ji okwu ndị dị ka “Ọkpara Chineke” wee mata ndụ Ya dị ka ihe atụ maka omume ụmụ mmadụ (United Church of Canada 1940, 2006).
Ọrụ enyere Mmụọ Nsọ bụkwa ọdịnala ọdịnala, agbanyeghị na nke a yiri ka agbanweela. A na-ahụta Mmụọ dị ka ọnụnọ Chineke na-aga n'ihu n'etiti ndị kwere ekwe na isi iyi nke ntinye Ndị Kraịst. Nkwupụta izizi jiri mkpụrụ okwu Metọdist dịka ntụgharị, izi ezi, na ido nsọ na ntụle ọrụ Mmụọ na ndụ mmadụ, mana okwu ndị a anọghị n'oge ahụ. “Abụ nke Okwukwe” (United Church nke Canada 2006).
Nghọta nke nzọpụta (soteriology) pụtakwara na ọ na-agbanwe. Nkwupụta izizi ndị mbụ nke "Ntọala nke Njikọ" na-arụtụ aka na nzọpụta site na ntughari, nchegharị, amara Chineke na ịmaliteghachi, ma tinye paragraf na ido nsọ. 1940 “Nkwupụta nke Okwukwe” ewepụtaghị ọtụtụ okwu a ma tinye mmesi ike karịa na baptizim. Etuola aka maka nchighari na “Abu oma nke okwukwe” mana ekwuputaghi ya. Nkọwa doro anya na ntụgharị mgbanwe na usoro Metọdist anọghị akwụkwọ atọ a. Specific eschatological asụsụ na-adịghị na niile atọ akwụkwọ. Na-enweghị ederede doro anya, enwere nkwenye zuru oke nke nkà mmụta okpukpe nke mgbe ụwa gasịrị (United Church of Canada 1940, 2006).
N’ụzọ dị iche, akwụkwọ atọ a gosiri mkpa na-arịwanye elu maka mmata ịhụnanya Chineke nwere maka mmadụ niile na ụzọ chọọchị ga-esi agba akaebe banyere ịhụnanya ahụ. "Abụ nke Okwukwe" kapịrị ọnụ na mmetuta ya na nsonye, ​​na-akpọ aha ọtụtụ otu ndị ọdịbendị ọdịnala, na igosipụta ụta ụka ahụ maka akụkụ ya na ewepu ma ọ bụ wezuga ndị dị otú ahụ (United Church of Canada 1940, 2006).
Otu onye edemede na-ekwu na, n'ịhọrọ iji mesie ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ ike, “Chọọchị United Church hapụrụ echiche nke onwe dị ka onye chọrọ nchigharị na nguzobe, otu mgbe ọ bụ ihe dị mkpa n'echiche ọha mmadụ, nkwenkwe nke guzobere ntọala nke okpukpe Protestant Protestant ruo narị afọ abụọ. ” Onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na chọọchị Evangelical Mark Knoll ekwuola na n'oge ụka nabatara ikpe ziri ezi nke ọha na eze dị ka ebumnuche ya kachasị, nke a hapụrụ ya "enweghị obere ihe iji nye ọdịnaya nke Ndị Kraịst…" mana nke a bụ ikwubiga okwu ókè, dịka nyocha a nke nkuzi. nkwupụta na-egosi n'ụzọ doro anya (Schweitzer et al. 2012: 291-92).
Ememe ndị bụ isi nke UCoC bụ nzukọ a na-enwe kwa izu maka ofufe nke ebubo ndị ụkọchukwu (ọgbakọ). N'ozuzu, ọrụ ofufe ndị a na-agbaso usoro egwu, ekpere, ọgụgụ Akwụkwọ Nsọ, na ikwusa ozi ọma nke ndị otu ụka kachasị mkpa, ndị na-ezisa ozi ọma na ndị na-abụghị akwụkwọ okpukpe maara nke ọma. Otú ọ dị, UCoC bụ nsonaazụ nke njikọta n'okpukpe niile nke ọdịnala ofufe atọ dịbu adị, ma na-eme amụma nke "nnwere onwe iwu" gbasara ụdị ọrụ. N’ihi ya, ọgbakọ nke ọ bụla nweere onwe ya ihiwe (ma ọ bụ ịga n’ihu) ụdị nke ya ma ọ bụ usoro ọrụ ya, a na-enwekwa ọdịiche dị ukwuu n’ọgbakọ. O yikarịrị ka ọ ga-adị mma ịsị na nnwale n'ụdị ofufe dịkarịsịrị na UCoC karịa n'ụka ụka ndị ọzọ bụ isi nke ndị Protestant. Ofufe Sundaybọchị Sọnde ọ bụla adịchaghị njọ (Schweitzer et al. 2012: xvi, 185, 188, 191).
Ọtụtụ ọgbakọ, ikekwe kachasị, na-eji ụfọdụ nsụgharị, ozugbo ma ọ bụ na mmezi mpaghara, nke usoro ọrụ enyere na ukwe na nso nso a, Olu United: Akwụkwọ Ukwe na Ofufe nke United Church of Canada (Hardy 1996) ma ọ bụ mgbakwunye ya kachasị ọhụrụ, More Olu (United Church of Canada 2009). Na Olu United Hymnal na-enye egwu di egwu di iche-iche, ma nke omenala ma nke oge a, ma site na omenaala di iche-iche. Ihe ndi a na enye iwu maka oru puru iche dika baptism, ntinye ndi ohuru, ntinye onye ozi ohuru, agbam akwukwo na olili. Ndị a na-emeghe ka mgbanwe. A na-ewere ọgụgụ Akwụkwọ Nsọ sitere na Agba Ochie, Agba Ọhụrụ, Abụ Ọma, na Akwụkwọ Ozi si na Akwụkwọ Ozi Na-ahụkarị nke ọtụtụ ụka dị iche iche na-eji (Hardy 1996)).
A na-enye udo n'otu oge, ugboro ugboro n'otu ọnwa. “Mmanya” e ji mee ya bụ mmiri mkpụrụ vaịn, a ga-ewepụtakwa ya n’ọtụtụ ụzọ: jiri chalice ma tee ebe ịchụàjà, were obere iko n’elu ebe ịchụàjà, ma ọ bụ ịgafe trays ọgbakọ nke obere iko na efere achịcha ụdị wafers). Baptizim nwere ike ịbụ nke ụmụ aka ma ọ bụ nke ndị toro eto, ọ na-abụkarị site n'ịfesa mmiri. Okpukpe ahụ na-abụkarị Okpukpe Ọhụrụ nke UCoC. (United Church of Canada 1940, 2006).
A na-ejikarị ejiji dị iche iche nke Geneva Gown, nke e ketara site na chọọchị ndị bu ya ụzọ, taa Uwe, obu ezie na ha adighi esocha agba nke oge dika ha na eme na ulo uka ndi ozo (united-church.ca Worship Resources, Church Seasons and Sunday Sunday).
UCoC na-arụ ọrụ na usoro "ala elu" nke gọọmentị na-amalite na ọgbakọ ọ bụla (nke ụka kpọrọ ụgwọ ụkọchukwu). Ndị òtù ọgbakọ na-ahọpụta n'etiti onwe ha otu ọgbakọ ọgbakọ ma ọ bụ kansụl na-eme ma ọ bụ na-atụpụta atumatu. N’ebe ndị dị oke mkpa (mmefu ego, mgbanwe ụkọchukwu, wdg), atumatu ga-akwado site na ọgbakọ ọgbakọ. A na-akpọ ndị ụkọchukwu nke UCoC ndị ozi. E nwere ọtụtụ edemede, gụnyere ndị ozi a họpụtara ahọpụta na ndị a họpụtara ahọpụta, na ụzọ atọ nke ije ozi nkịtị (United Church of Canada 2010).
Ọgbakọ ọ bụla na-akpọ onye ụkọchukwu nke ya (n’abụghị ikenye ma ọ bụ nyefee ya n’ụlọ ọrụ ụka). Ọ bụkwa ọrụ maka ọrụ ya kwa ụbọchị: ịwelite ego; iwu ụlọ ma ọ bụ ilekọta ya; iwere ndi oru, dika ndi egwu na ndi nlekota oru; na ikpebi mgbe a ga-efe ofufe. Ọ na-ehiwekwa amụma banyere ịzọ ọkwa maka baptism na alụm di na nwunye, ime ihe nke ụlọ akwụkwọ Sọnde, mmemme ndị ntorobịa yana ịbịakwute obodo (Church of Canada 2010)).
Nchịkọta nke 35 ka 60 ebubo ụkọ nri mere Presbytery (enwere 85). Ndị Presbytery nwere ndị e chiri echichi ma debekwa ndị nnọchi anya ma na-arụsi ọrụ ike karịa, na ndụmọdụ ndụmọdụ, n'oge mgbanwe nke ọrụ. Presbytery, n'aka nke ya, bụ otu n'ime nzukọ iri na atọ. Mgbakọ na-ahụ maka ọzụzụ na agụmakwụkwọ nke ndị ga-aga ozi, maka ịmepe usoro ọrụ ụka, yana ịhọrọ ndị Kọmishọna ịga nzukọ General Council (Chọọchị Canada 2010)).
General Council bụ ụlọ ọrụ iwu kacha elu nke ụka (ma ọ bụ ụlọ ikpe). Kwa afọ atọ ndị ụkọchukwu na ndị ọrụ kọmitii na-ezukọ iji setịpụ ụkpụrụ ma họpụta onye njikwa ọhụrụ (onye isi ụka na ihu ọha nke ụka). Ntinye nke UCoC ji kpọrọ ihe gosipụtara na ndị otu nhazi nke ndị mmezi. Enweela ụmụ nwanyị, Mba Ndị Mbụ na ndị na-eme mmekọrịta nwoke na nwanyị n'ihu ọha n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Kọmitii Executive na kọmitii nke ndị isi na-achịkwa n'etiti nzukọ nke General Council. General Council na-arụkarị ọrụ na ajụjụ ma ọ bụ atụmatụ (nke a na-akpọ "nkwụghachi") site na ọgbakọ ma ọ bụ na akwụkwọ ọmụmụ nke kọmitii ndị Kansụl họpụtara. Chọọchị elebara anya n'oge na-adịghị anya ịbelata usoro nke ọkwa ọchịchị anọ (ma ọ bụ ụlọ ikpe) na atọ, mana emeghị ihe ụka dum (Church of Canada 2010; Moderators 2013; Schweitzer et al 2012: 168-69).
Na-akatọ Churchka United Church nke Canada (UCoC bụ ihe dị ezigbo nso na ọ bụ egwuregwu mba Canada. Nkatọ a na-esite n'ime ma na enweghị ụka. Ọtụtụ ndị otu, na ọbụnadị ọgbakọ, ahapụla ụka n'ụka nwere ezigbo esemokwu. E nwere ọtụtụ ihe metụtara Otu isi ihe dị na ya bụ nkewa n'etiti ịka nká n'ike n'ike, nke na-adịkarị mgbanwe, ịbụ onye otu na obere nwatakịrị, onye na-aga n'ihu n'ike n'ike, onye ndu.Uzo nke abuo bu atumatu UCoC nke nnwere onwe nkwenye, na-eto site n'akụkọ ihe mere eme ya dịka njikọta nke ụka niile Chọọchị ahụ achọghị ka ndị ụkọchukwu ọ họpụtara debanye aha n'ụzọ zuru ezu na nke ọ bụla n'ọtụtụ nkwupụta nkwenkwe ya. Nkewa ndị a keere oke ọrụ na esemokwu banyere "Usoro Ọmụmụ Akwụkwọ Ọhụrụ (nke Sọnde)" na, n'oge na-adịbeghị anya, na chọọchị nsonye nke ndị ụkọchukwu na ndị nwanyị nwere mmasị nwanyị na ịnakwere alụmdi na nwunye nwoke na nwanyị (Schweitzer et al. 2012: xi, xiii, 107-09, 125-26, 135, 142-43, 151-53, 155, 164-68).
Enwere isi ihe ọzọ na nkatọ nke ime na mpụga nke nkwupụta amụma nke General Council na nso nso a. Ndị ndu nke ụka na akụkụ buru ibu (mana enweghị ike ịkọwapụta) nke ndị otu ahụ na-ahụ nsonye na ime ihe maka ikpe nkwụmọtọ obodo dịka ihe Chineke tụrụ anya ya maka ụka na ụwa a ma nwee mmetụta na-aga n'ihu na-edu ndú ọrụ n'okwu ndị a. Echiche a doro anya, ọbụlagodi na ebumnuche mbụ maka ijikọ onwe ya, na-agba mbọ iji ihe ndị ụka nyere rụọ ọrụ nke ọma iji mee mba ọhụrụ Christiani. Offọdụ n’ime ihe mbụ chọọchị ọhụrụ ahụ mere bụ n’imezu ihe a hụrụ dị ka iwu Chineke nyere ka anyị hụ ndị ọzọ n’anya. Mmetụta a nke ibu ọrụ okpukpe nyere ndị ọzọ dara ogbenye, igosipụta ịhụnanya Chineke maka mmadụ niile, dugara n'ụgbọ mmiri zuru ezu maka nri maka agụụ ịda mbà n'obi-oge nkatọ, ịkatọ gọọmentị siri ike mgbanwe, ịkwado ọrụ ọrụ a haziri ahazi, yana mgbochi siri ike - onodu agha tupu agha. Ọnọdụ udo ahụ butere nnukwu esemokwu ka mba ahụ malitere ịkwadebe maka agha, na mgbe oge gachara, dịka ụlọ ụka kpuchitere ndị na-edebe ndị agha Vietnam Nam War. Chọọchị ahụ ka na-akwado usoro kachasị mkpa maka ndị na-enweghị ebe obibi na Canada, na omume nke General Council na afọ ndị na-adịbeghị anya gosipụtara ike chọọchị na-etinye aka na ndị na-enweghị isi na ndị na-enweghị ikike, na ndị nọ n'okpuru, ebe ọ bụla enwere ike ịchọta ndị a ( Schweitzer et al. 2012: 24, 31, 42, 49, 60-63, 103, 112-13, 289; fredvictor.org/our ndị nyere onyinye)
Nsogbu a bụ na akụkụ dị ukwuu nke ndị Canada, ọkachasị ndị Canada toro eto ma na-echekwa nchekwube, na-ahụ okpukperechi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka ngalaba ọrụ dị iche. Dika Canada abanyela na mba ozo, onu ogugu ndi na-ako aju agha emeela ihe di iche na ndoro ndoro ochichi nke ikwenye ikpe ziri ezi. Otu akụkọ ana ekwu maka ụka dika "NDP n'ekpere" (New Democratic Party [NDP] bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị aka ekpe nke Canada. Ewezuga esemokwu a na-enwe maka okwu metụtara mmekọ nwoke na nwoke, nkwa ụka ahụ maka ndị otu ana-emekpa ahụ, dịka Mba mbu na ndi ojii South Africa n’oge nke apartheid, ebulie mkpu (Schweitzer et al. 2012: xiii, 126, 133-35, 163-64, 166, 173, 177, 281-83).
Ihe ọzọ kpatara esemokwu metụtara akwụkwọ akụkọ ụka, United Church Observer, nke nwere siri ike akwado ebumnuche Palestine. Ọ bụ ezie na UCoC nwere akụkọ ihe mere eme nke nkwado siri ike maka Israel na obodo ndị Juu n'ozuzu ha, omume ndị a na-adịbeghị anya na nkwado nke ndị Palestaịn, gụnyere oku maka ịchụpụ ngwongwo Israel nke achọpụtara n'obodo ndị bi na mpaghara esemokwu, ewe ezigbo iwe nke ọtụtụ ndị na-akwado nkwado nke Israel. . E boro ụka ebubo na mbipụta nke mgbochi Semitism (Schweitzer et al. 2012: 239-57; Lewis 2012).
N’etiti esemokwu ọha na eze a, e nweela oku oku maka chọọchị ịlaghachi n'okpukpe, ọrụ ndị isi ụka (na ọtụtụ ndị otu ya) kwenyere na ha na-akwado omume ha. Maka UCoC, a na-ahụ omume maka nsonye na ikpe ziri ezi ọha na eze dị ka ihe gbasara iguzosi ike n'ezi ihe nke okpukpe. Nye ọtụtụ ndị na-achọghị mgbanwe, a na-ahụ omume ụka ahụ dị ka ịrara okpukpe mgba okpuru (Lewis 2012).
Fred Victor. nd “Anyị Donors.” Nweta site na http://www.fredvictor.org/our_donors na 28 February 2013.
Hardy, Nancy. 1996. Olu United. Etobicoke, Ontario, Canada: Churchlọ Nzukọ Alaeze nke United Church.
Lewis, Charles. 2012. "Churchka n'ihe ize ndụ karịrị Activism." Akwụkwọ ozi nke mba, August 16. Nweta site na http://www.canada.com/nationalpost/news/story.html?id=d8fd2b6e-cefa-4065-849d-81da2532c83c na 28 February 2013.
Ndị mmezi nke United Church of Canada. 2013. "Usoro iheomume." Nweta site na http://www.united-church.ca/history/overview/timeline na 18 February 2013.
Schweitzer et al. 2012. United Church of Canada: Akụkọ. Waterloo, Canada: Wilfrid Laurier University Press.
United Church nke Canada. 2013. "Isi: Akụkọ Nchịkọta." Nweta site na http://www.united-church.ca/history/overview/brief na 9 January 2013.
United Church nke Canada. 2010. Ntuziaka. Nweta site na http://www.united-church.ca/manual na 15 January 2013.
United Church nke Canada. 2009. More Olu. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
United Church nke Canada. 2006. Abụ nke Okwukwe. Preamble, Appendix A and Appendix D. Nweta site na http://www.united-church.ca/beliefs/statements na 9 January 2013.
United Church nke Canada. 1968. “Okwukwe ọhụrụ.” Nweta site na http://www.united-church.ca/beliefs/creed na 9 January 2013.
United Church nke Canada. 1940. Nkwupụta Okwukwe. Nweta site na http://www.united-church.ca/beliefs/statements na 9 January 2013.
United Church nke Canada. "Isi: Ihe ndabere nke Union." 1925. Nweta site na http://www.united-church.ca//istory/overview/basisofunion na 9 January 2013.
United Church nke Canada. nd “Church Church na Canada.”Nweta site na http://www.individual.utoronto.ca/hayes/Canada/churchunion.htm na 9 January 2013.